Ufuna izimpendulo umndeni wowabulawa esolwa ngokweba | News24
Ufuna izimpendulo umndeni wowabulawa esolwa ngokweba
PHOTO: SUPPLIED Lindokuhle Sibisi
UFUNA kwenzeke ubulungiswa umndeni wakwaSibisi e-Willowfontein emuva kokubulawa kwelunga lawo ngesihluku elatholakala lidindilize emathuneni ase-Azalea.
ULindokuhle Sibisi (25), kubikwa ukuthi watholakala eseshonile mhlaka 31 kuMfumfu emuva kokuthathwa abafana abaziwayo endaweni bayomshaya ngoba bethi untshontshe umakhalekhukhwini.
Udadewabo uThandeka Sibisi elandisa leliphephandaba ngokwenzeka uthe akucaci ukuthi umfowabo wayephuce bani umakhalekhukhwini njengoba kuze kube yimanje akekho oke waphumela obala wazobikela umndeni ngokwenzeka.
“Wayemi nabafana basendaweni emgaqweni ngesikhathi kuqhamuka imoto yathatha yena nomunye umngani wakhe kwathiwa bantshontshe umakhalekhukhwini. Balayishwa emotweni yahamba nabo bayoshawa ndawana thizeni base beqathazwa ezindaweni ezahlukene. Umngani wakhe yena wasinda ngoba lo owayentshontshelwa kuthiwa wathi wayengekho. Wasitshela ukuthi emuva kokushawa babalahla ezindaweni ezahlukene.”
Uthe emuva kokuthi uLindokuhle engabuyanga ekhaya ngoMgqibelo wesigameko mhlaka 30 kuMfumfu baphuma inqina behambe bemfuna ezinkalweni zonke kodwa wangatholakala.
“Siyabazi labafana abenza lokhu, ngokusizwa amanye amalunga omphakathi sahamba sayobabuza ukuthi bamshonisephi uLindokuhle kodwa bamphika bathi abamazi.”
Uthi babe sebeya ngasemathuneni ase-Azalea lapho kuthiwa imoto eyayithathe umufi yabonakala ihamba ngakhona ngosuku lwesigameko.
“Uma sibuza ngasemathuneni ukuthi abambonanga yini bathi bambona umfana owayeshayiwe wayelimele kakhulu engasakwazi nokukhuluma wabizelwa i-ambulensi ukuze imphuthumise esibhedlela.”
Uthi umndeni wanikela esibhedlela sase-Edendale nalapho wafike watshelwa khona ukuthi uLindokuhle ushonile.
“Saqale samubheka emawodini wangatholakala sagcina simthole emakhazeni eseshonile. Isidumbu sakhe sasimanxebanxeba ngicabanga ukuthi washona emuva kokopha kakhulu.”
Uthe okubaphatha kabi njengomndeni ukuthi abasolwa baboshwa baphinde babonakala sebecanasa emphakathini.
“Mhlaka 1 kuLwezi abasolwa kwakufanele bavele enkantolo kodwa kwathi uma amanye amalunga omndeni efika khona kwathiwa badedeliwe. Sifuna ukwazi ukuthi lokhu kwenzeka kanjani njengomndeni singazange saziswe ukuthi uphenyo luhamba kanjani? Kufanele sense njani ukuze sithole ubulungiswa. Ukudedelwa kwabo kubeka nofakazi balelicala engozini ngoba nabo bangazithola sebelahlekelwe izimpilo zabo.”
Okhulumela amaphoyisa ase-Plessislaer uCaptain Musa Ntombela ucele ukunikwa isikhathi ukuze aphenyisise kabanzi ngaloludaba kanti kuze kwafika isikhathi sokushicilela engakaphenduli.